ရောနှောစီးပွားရေး | စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေး
Encarni Arcoya | 03/01/2022 20:57 | အဆင့်မြှင့်တင် 03/01/2022 21:35 | အထွေထွေစီးပွားရေး
အခြေခံဘောဂဗေဒအခေါ်အဝေါ်များထဲမှ တစ်ခုသည် ရောထွေးစီးပွားရေးဖြစ်သည်။ နှစ်ခု သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော စီးပွားရေးစနစ်များ ပါဝင်သည့် စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွာခြားချက်မှာ ယင်းစနစ်များသည် ကွဲပြားပြီး တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက်ပင် ဖြစ်နေခြင်းပင်။
ဒါပေမယ့် ရောထွေးစီးပွားရေးဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ရှိလဲ။ ဘာအတွက်လဲ ဘယ်လို အားသာချက်တွေနဲ့ အားနည်းချက်တွေ ရှိသလဲ။ သိချင်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒါကို 100% နားလည်အောင် သော့ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။ ပြီးတော့ အောက်မှာ သင်သိထားသင့်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ပါပါတယ်။
1.1 ရောနှောစီးပွားရေးရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
2 ရောနှောစီးပွားရေးသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်သနည်း။
ရောနှောစီးပွားရေးအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ တစ်ဖက်တွင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီနှင့် တစ်ဖက်တွင် အများသူငှာ ရပ်တည်နိုင်သော စီးပွားရေးစနစ် နှစ်မျိုးရှိသည်။. တစ်နည်းဆိုရသော် ပုဂ္ဂလိကနှင့် အများပိုင်ကုမ္ပဏီများသည် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သည့် စနစ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေသော်လည်း စီးပွားရေးစနစ်သည် ၎င်းတို့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် စနစ်တစ်ခုအကြောင်း ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် အခြားသူတစ်ဦးကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေမီအထိ တိကျသေချာသော လွတ်လပ်မှုရှိသည်။
ဒီနေရာမှာတော့ ရောထွေးနေတာ တွေ့ရတယ်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကို လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်ခွင့်၊ ဒါပေမယ့်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ ပြည်သူ့ကဏ္ဍဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ ထိန်းညှိပေးသူနဲ့ ပြုပြင်ပေးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးက မလုပ်သင့်တာတစ်ခုခုလုပ်ရင်၊ အစိုးရကဏ္ဍက ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေအတွက် ပထမလူကို ဆင်ဆာ ဒါမှမဟုတ် ဒဏ်ရိုက်နိုင်တယ်။
ရောနှောစီးပွားရေးရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
ရောနှောစီးပွားရေးဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို အခု သင်ပိုသိလာရပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေကို တွေးတောဖို့ အချိန်တန်ပြီ၊ တော်တော်များများ ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။ အရာများကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေရန်၊ သင်သိထားသင့်သည်-
အစိုးရရော ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍရော ရှိတယ်။ ၎င်းတို့ကြားရှိ ဆက်ဆံရေးသည် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် မရှိဘဲ တည်ရှိမနေဘဲ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး တစ်ရပ်ဖြစ်ရမည်။ သူတို့ အသီးသီး ဘာလုပ်ကြသလဲ။ ကောင်းပြီ၊ အစိုးရကဏ္ဍက ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းတွေ၊ စွမ်းအင်တွေ တည်ဆောက်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ် (တစ်နည်းပြောရရင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက အသုံးပြုမယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေ)။ ဒုတိယအခြေအနေတွင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းသည် ကုန်စည်နှင့် စားသုံးမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ အဆင့်မြင့် ကဏ္ဍများ ဖြစ်လိမ့်မည် ။
လွတ်လပ်မှုဆိုတာ သေချာတယ်။ လုံးဝလွတ်လပ်မှု သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်ရှိသည်ဟု ဆိုသော်လည်း အစိုးရမှ တဆင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ အချို့သော ကဏ္ဍများကို ထိန်းကျောင်းနိုင်စေကာမူ ယင်းကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည့် နည်းလမ်းဖြင့် အတိအကျ ဆောင်ရွက်နိုင်သည် မဟုတ်ပေ။ .
ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း တည်ရှိမှုရှိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဝင်ငွေနဲ့ ချမ်းသာမှု နှစ်ခုစလုံးကို မျှမျှတတ ခွဲဝေမှု မလုပ်ခင်မှာ ဖြစ်ရမယ်။ တစ်နည်းဆိုရသော် လူတိုင်းသည် တူညီသောအကျိုးခံစားခွင့်များ၊ ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုတို့ကို ရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
လူမှုဖူလုံရေး နှင့် အကျိုးအမြတ်များ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး။ ရောနှောသောစီးပွားရေးတွင် အမြတ်အစွန်းကိုအခြေခံ၍ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရရှိရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်တွင် အမြတ်အစွန်းကိုအခြေခံသည့် စနစ်တစ်ခုကို သင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။) သို့သော်၊ လူမှုဖူလုံရေးဟူသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူနေမှုဘဝမြှင့်တင်ပေးသည့် စနစ်တစ်ခုကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်သည်။
စီးပွားရေးမညီမျှမှုများကို လျှော့ချပါ။. ချမ်းသာခြင်းနှင့် ဆင်းရဲကြားရှိ ကွာဟချက်ကို လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခြားမရှိပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အစွန်းရောက်များထက် "ပျမ်းမျှ" လူဦးရေကို ဖန်တီးပါ။
ရောနှောစီးပွားရေးသည် မည်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်သနည်း။
မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ ရောထွေးတဲ့စီးပွားရေးဟာ အလုပ်လုပ်တဲ့ စနစ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်တယ်။ တကယ်တော့ ဇယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း သို့မဟုတ် တရုတ်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် ကျင့်သုံးသည်။ (ဤနေရာတွင် အကြိမ်များစွာ ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးဟု ယူဆကြသော်လည်း)။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ယူကေတွင်၊ အစိုးရသည် တိုင်းပြည်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းကို ဂရုစိုက်သည်၊ လွှမ်းခြုံပေးသည်၊ ဆရာဝန်များနှင့် ဆေးရုံများကို ခန့်အပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်။ ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းများသည် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
၎င်း၏ပုံစံသည် ခေတ်မီသော ရောနှောစီးပွားရေးစနစ်ဟု ဆိုကြသော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံတွင် အလားတူကိစ္စရပ်မျိုး ဖြစ်ပျက်နေပါသည်။
ဒါတွေအားလုံးက ဘာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားစေတယ်။ ရောနှောစီးပွားရေးစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဤရွေ့ကား:
အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများအကြား ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေး။ ယင်းအတွက် နိုင်ငံတော်သည် ဥပဒေများ ဆက်တိုက်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းဖြင့် ကဏ္ဍနှစ်ရပ်စလုံးကို မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားဥပဒေအပေါ် အခြေခံ၍ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များချပါ။
စျေးကွက်ပြဿနာများ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုများတွင်၊ ၎င်းသည် ဆောင်ရွက်ပေးမည့် နိုင်ငံတော် (အစိုးရ) ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အားလုံးက လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်ကလည်း ကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ထုတ်လုပ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် တယ်လီဖုန်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ရေ အစရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် အမြတ်အစွန်းမရတဲ့အရာတွေချည်းပါပဲ။
အသက်ရှင်သန်ရန် အနည်းဆုံး အာမခံပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ လူတိုင်းတွင် အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန် လုံလောက်သော အနိမ့်ဆုံးရှိရန် ညီတူညီမျှ ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်တစ်ခု ရရှိရန်ဖြစ်သည်။
ရောနှောသောစီးပွားရေးသည် ကုမ္ပဏီများနှင့် အများပိုင်ကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိနိုင်သည်ကို ထင်ရှားပါသည်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်တည်းမှာ အားနည်းချက်တွေရှိတယ်။
၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်သောကြောင့် ကုမ္ပဏီများအတွက် လွတ်လပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ဆုလာဘ်များ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
ထိုလွတ်လပ်မှုနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုအချို့ရှိခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဝယ်သူများ၏မျက်နှာသာ၌ အဆက်မပြတ် ဆန်းသစ်တီထွင်နေစေသောကြောင့် ဖောက်သည်အား ကျေနပ်စေရန် အမြဲကြိုးစားနေပါသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမဟုတ်သော်လည်း အများအပြားရှိနိုင်သောကြောင့် ရွေးချယ်စရာများ ပိုများသည်။
ထို့အပြင် ဝင်ငွေများကို စျေးကွက်များအတွက် တူညီစေရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အခုကြားထဲမှာ အားနည်းချက်များကို မျက်ခြေမပြတ်စေရပါ။ ကျနော်တို့ရှိသည်:
အဆက်မပြတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်သည်၊ များစွာသောမအောင်မြင်နိုင်သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစိုးရ ကဏ္ဍသာမက ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍလည်း ပါပါတယ်။
မသေချာမရေရာမှုတစ်ခုရှိတယ်။ အမှန်မှာ အစိုးရ၏ တည်ရှိနေခြင်းသည် ၎င်းကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတစ်ခုအဖြစ် လူအများက မြင်ကြပြီး ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် "လွတ်လပ်မှု" ကို ကန့်သတ်ထားသည်။
အခွန်အရေအတွက် ပိုများပြီး အဲဒါတွေက ပိုများတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရသည် ၎င်း၏အာမခံချက်ကို ဦးစွာထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရောနှောစီးပွားရေးဆိုတာ အခုမှ ပိုရှင်းနေသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » ရောထွေးစီးပွားရေးဆိုတာဘာလဲ